Gary Neville oo fariin muhiim ah u diray tababaraha Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær – Gool FM
(Manchester) 24 Juunyo 2019. Halyeeyga kubadda cagta England iyo kooxda Manchester United ee Gary Neville ayaa wuxuu fariin muhiim ah u diray macalinka Red Devils ee Ole Gunnar Solskjær.
Manchester United ayaa natiijooyin niyadjab leh ku qaadatay horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ee 2018/2019, waxayna ku dhameysteen kaalinta 6-aad ee dhanka kala sareynta, taasoo ka hor istaageysa inay ka qeyb galaan tartnaka Champions League xili ciyaareedka cusub.
Hadaba Gary Neville ayaa wuxuu u arkaa in Manchester United ay la dhibtooneyso joogitaanka hogaamiyeyaasha kooxda si ka duwan maalmihii wacnaa ee garoonka Old Trafford.
“Markii aan ciyaari jiray waxaa jiray 3 kooxood oo kala ah – hoggaamiyeyaasha, kooxda dhexe iyo ciyaartoyda yaryar”.
“Markii aan bilaabay inaan ka ciyaaro kooxda koowaad, waxaa jiray ciyaartoy sida Paul Ince iyo Roy Keane, baaska qaldan xiligaas waxay ka dhignaayeen dambi buuxa”.
“Manchester United hadda ma heysato hogaamiyayaal, Waxaa jira xirfadleyaal wanaagsan sida Juan Mata, Ander Herrera iyo sidoo kale Scott McTominay, waxaad arki kartaa inuu yahay ciyaaryahan fiican islamarkaana uu doonayo inuu ciyaaro kubadda cagta”.
“Laakiin uma maleynayo inay saameyn ku yeelan karaan qolka labiska, si ay u noqdaan kuwo awooda inay xakameeyaan dhaqanka, tani waa dhibaato dhab ah”.
Torriera Oo Go'aanka Mustaqbalkiisa U Gudbiyay Arsenal, Xilli Miiska Uu U Saarranyahay Dalabkii Milan.